Degso Tor Browser loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (69.80 MB)
Degso Tor Browser,
Waa maxay Tor Browser?
Tor Browser waa biraawsar internet lagu kalsoonaan karo oo loo sameeyay isticmaaleyaasha kombiyuutarka ee daryeela amnigooda iyo asturnaanta qadka, si ay si qarsoodi ah ugu baaraan internetka ugana dhex socdaan iyagoo ka saaraya dhammaan caqabadaha ka jira dunida internetka.
Software-ka, oo u shaqeeya sidii gaashaan adag oo loogu talagalay ilaalinta taraafikadaada shabakadda iyo tirakoobka sarrifka xogta, oo lagu basaasi karo ama lala socon karo ilo kala duwan, ayaa sidoo kale qarinaya macluumaadkaaga internetka iyo xogta taariikhda internetka marka lagu daro inaad qariso goobtaada iyadoo lagaa caawinayo oo ah astaamo iyo qalab kala duwan.
Tor Browser, oo ku saleysan aasaaska shabakadda ee laga aasaasay server-yada dal-ku-galka ah, ayaa kuu oggolaanaya inaad internet-ka si qarsoodi ah uga baaraan-degto oo aad gasho goob kasta oo aad rabto oo aan lagaa mamnuucin ama lagaa xirin. Browser-ka, oo isweydaarsada xogta kumbuyuutarrada kala duwan ee adduunka oo idil iyadoo la raacayo xeerar iyo algorithms kala geddisan, waa wax aan macquul aheyn in lala socdo maxaa yeelay waxay ka heshaa dhammaan taraafikada ilo kala duwan.
Sida loo Isticmaalo Baadhista Tor
Iyadoo la adeegsanayo nooc loo habeeyay Firefox, Tor wuxuu leeyahay qaab fudud oo fudud oo adeegsigiisu yahay Vidalia. Sidan oo kale, softiweerka, oo ay si fudud ugu isticmaali karaan isticmaaleyaasha heerarka oo dhan, ayaa aad ugu baran doona adeegsadayaasha horay u soo isticmaalay Firefox.
Si aad u bilawdo adeegsiga biraawsarkaaga kadib hawl rakibo oo dhib iyo dhib laaan ah, waa inaad marka hore sameysaa goobaha shabakada ee lagama maarmaanka u ah ama aad ku xirato shabakada Tor adoo adeegsanaya hab otomaatig ah. Hawlgalladan waxaad ku samayn kartaa adigoo ku riixaya xoogaa qasabno ah interface-ka oo soo muuqan doona ka dib rakibidda, waxaadna bilaabi kartaa inaad adeegsato Tor Browser, kaasoo si otomaatig ah u furmi doona ka dib marka aad ku xirmaan shabakadda Tor.
Soodejiso Tor Browser
Markii aan soo qaadano dhamaan astaamahan aan soo wada xusnay, Tor Browser waa mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan uguna kalsoonida badan ee daalacan ee aad u isticmaali karto inaad internetka si xor ah uga dhex adeegsato isla markaana aad ku gasho goobaha xiran.
Adeegyada raadinta xannibaadda: Bro Browser wuxuu adeegsadaa xiriir ka duwan bog kasta oo aad booqato. Marka, adeegyada daba-galka iyo xayeysiinta ee dhinac saddexaad ma soo ururin karaan macluumaadka adiga kugu saabsan adoo ku xiraya bogagga internetka ee aad gasho. Kukiyada iyo taariikhdaada si otomaatig ah ayaa loo tirtiray markii aad dhammeeysid marinka shabakadda.
Ka ilaali raad raaca: Tor Browser wuxuu ka hortagaa dadka laga yaabo inay ku raad joogaan inay arkaan boggaga aad booqatay. Waxay arki karaan oo keliya inaad isticmaaleyso Tor.
Iska caabinta faraha: Tor Browser wuxuu ujeedkiisu yahay inuu ka dhigo dhamaan isticmaaleyaasha inay u ekaadaan si aan kala sooc lahayn iyagoo ka hortagaya in lagaa qaado farahaaga dhijitaalka ah, oo kuu aqoonsan kara adiga oo ku saleynaya macluumaadka biraawsarka iyo qalabka.
Qarsoodi dhowr-lakab: Maaddaama taraafikadaada isku-xirka ay ka gudubto shabakadda Tor, waxaa loo sii mariyaa seddex istaag oo kala duwan waana laqariyaa mar kasta. Shabakada Tor waxay ka kooban tahay kumanaan server oo iskaa wax u qabso ku shaqeeya oo loo yaqaan Tor relays.
Si xor ah ugu dul wareeji internetka: Tor Browser, waxaad si xor ah u geli kartaa boggaga laga yaabo inay xannibaan shabakadda aad ku xiran tahay.
Soo dejiso Tor Browser si aad u aragto daalacashada bilaashka ah ee aad ku ilaalin karto asturnaantaada shakhsi ahaaneed adigoon la socon, ilaalin ama xannibaad.
Tor Browser Noocyada
Cabirka Faylka: 69.80 MB